२०७६ भदौ २१ शनिबार ०९:१९:०० | काठमाडाैं
अपराजिता,०७६ भाद्र ७ गते । पर्यटन बोर्डमा आयोजित ‘तामाङ ज्ञान महोत्सव’मा केही अनुभूति साट्न यो लेख तयार पारिरहेको छु । मेरा अनुभूति तिमीलाई मन्जुर छन् भन्ने मलाई विश्वास छ ।
यस ज्ञान महोत्सवमा कुनै ठोस लेखन लिएर उपस्थित भएकी छैन । तामाङ धार्मिक, सांस्कृतिक र मातृभाषाको माहोलमा मेरो बचपन र शैशव हुर्कन पाएन । त्यसैले मेरो प्रस्तुति केही अनुभव, केही जिज्ञासा, केही असन्तुष्टि र केही आशाका पेटिका मात्र हुनेछन् । विषय प्रवेश गर्नुअघि पारिवारिक पृष्ठभूमिका केही झलक अघि सार्न सान्दर्भिक ठान्छु ।
बुबाको धर्मप्रति र धार्मिक संस्कारप्रति आस्था नहुनु सम्भवतः तिनै मृत्युहरूको परिणति हुन सक्छ । हामीकहाँ न देवताका थान ‘ल्हासेम’ थियो न घरमा पूजापाठ नै हुन्थ्यो । सारा नेपालीले मनाउँदै आएका हिन्दू संस्कार प्रदत्त चाडपर्व दसैँ–तिहार पनि केवल हामी केटाकेटीको रहर पूरा गरिदिन मात्रै मनाउँथे । मानवीय मूल्य–मान्यता कायम राख्न तथा सभ्य संस्कार वरण गर्नमा मात्र जोड दिइन्थ्यो । को हिन्दू, को बुद्घिस्ट, को इसाई, को दलित भन्ने भेदभाव नै थिएन । हामी केवल मान्छे भनेर मात्र चिन्थ्यौँ । उसवेला पनि एउटा दरिलो सत्यले भने हाम्रो मनमा घर गरेको थियो । त्यो के भने हामी नेपाली हौँ, हाम्रो आफ्नै स्वतन्त्र देश नेपाल छ । यसैमा गर्व गरिन्थ्यो । यो पनि हाम्रै बुबाको देन थियो ।
कुमारसिंह दाइका काइँला भाइ दिदी आउनुअगावै काठमाडौं छिरिसकेका थिए । दिदीलाई उनको प्रथम सुझाब थियो– ‘बहिनी, कसैले तिम्रो जात सोधे तामाङ नभन्नू, गुरुङ हुँ भन्नू । तामाङलाई यहाँ असाध्य घृणा गर्छन् ।’ किन जात लुकाउने ? मेरो प्रथम झड्का बस् यही थियो । नेवार जातिले समेत हामीलाई ‘शमिनी’ भन्थे र हेयको दृष्टिले हेर्थे । पछि थाहा भयो शमिनीको अर्थ ‘पाखे’ पो रहेछ ।
म काठमाडौं आएर रात्रि कलेज पढ्न थालेँ, जहा म एकजना मात्र तामाङ विद्यार्थी थिएँ । दिदी दिवा कलेज पढ्थिन्, जहाँ उनी एकजना मात्र तामाङ विद्यार्थी थिइन् । किन यस्तो ? मेरो दिमागमा परेको दोस्रो झट्का थियो यो । छिमेकी घरमा र हाम्रै घरमा पनि तामाङ किशोरीहरू घरधन्दाका सहयोगीका रूपमा काम गर्थे । विद्यालयमा तामाङ विद्यार्थी नहुनु तर दरबारहरूमा सुन्दरी तामाङ महिला भित्रिनी र सुसारेका रूपमा हुनु अर्को झड्का र जिज्ञासा थियो मेरा लागि ।
यस्तै अन्योलको वातावरणबीच केही तामाङ अगुवाद्वारा तामाङ जागरण र उत्थानका निम्ति तामाङ समितिको गठन भयो । समितिको खास नाम अहिले सम्झन सक्दिनँ तर समितिका केही पदाधिकारी सम्झन सक्छु । सम्भवतः श्री सन्तवीर लामा समितिका अध्यक्ष थिए । समितिका अरू पदाधिकारी मेरो स्मरणमा रहेका हर्कजित लामा, सिद्घिबज्र लामा, बुद्घिमान तामाङ र हाम्रा दाइ कुमारसिंह लामा थिए । त्यसै बखत दुई पुस्तक, ‘तम्बा कइतेन’ र ‘जिकेतन तामछ्योई’ प्रकाशित भयो ।
मलाई प्रस्ट सम्झना छ, बौद्घ निवासी सिद्घिबज्र लामा भन्थे, ‘हामी दुई पैसामा घेवा (मृत्यु कर्म) सम्पन्न गरिदिन सक्छौँ ।’ घेवाको जटिलता र खर्चिलो चलन देखेर नै उनले त्यसो भनेको हुनुपर्छ । दिदी र मलाई उनको कथन तथ्यपूर्ण लागेको थियो । किनकि उनले नै भने, ‘एकजना तामाङ बन्धुले आफ्नो सामाजिक प्रतिष्ठाका निम्ति छोराको घेवामा आफ्नो एक मात्र जमिनको टुक्रा बेचेका थिए ।’
पुतलीसडक पायक पर्ने ठाउँ भएकाले धेरैजसो बैठक हाम्रै घरमा बस्ने गरिन्थ्यो । बौद्घमा बसेको कुनै एक बैठकको समापनपश्चात् समितिका पदाधिकारी खुसीले नाचेका स्मरणमा अझ पनि ताजै छ । भीमकाय शरीरका धनी सन्तवीर लामाको कम्मर मर्काई र हर्कजित लामाको एकै ठाउँ उभिएर टाउको मात्र हल्लाउने नृत्यले सबैलाई मनोरञ्जन दिएको थियो ।
त्यसै ताका बौद्घमा आफ्ना दिवंगत आफन्तको सम्झनामा ‘सद्बिउ’ छर्ने पर्वलाई निसाना बनाएर तामाङ जातिको जागरणको बिगुल फुक्ने कार्यक्रम तय भयो । केही तामाङ महिला, दिदी र मलाई उक्त अवसरमा गीत गाउन जिम्मा दिइयो । जसको प्रारम्भिक बोल थियो, ‘रेगो ले रेगो नाना ज्यो ज्यो, रेगोले रेगो आङा आले ।’ (उठ न उठ दिदी दाइ, उठ न उठ बहिनी भाइ) तामाङ स्वयंसेवक भक्तजनको सेवाका निम्ति औषधोपचार र विभिन्न सहयोगका निम्ति जुटेका थिए । त्यस विशेष अवसरमा नया“ उत्साह र उमंगका साथ हामी राति पनि जागाराम बसेर खटेका थियौँ । यो एक सुखद अनुभूति थियो ।
समय बित्दै जाँदा तामाङ विज्ञबाट यस प्रकारका कैयन् दमनका तथ्य कति सुनियो कति । युग पाठक लिखित पुस्तक ‘माङगेना’ पढेपछि इतिहासबारे धेरै कुरा छर्लंग भयो । अझ रणबहादुर शाहको पालामा ‘तामाङ जातिलाई मार्नू’ भन्ने इतिहासको कुरा अहिले सुन्दा छा“गाबाट खसेजस्तै भएँ । यसबाट प्रमाणित हुन्छ, हामीले युगौँदेखि घोर शोषण, दमन खेपेका रहेछौँ ।
बितेको ६ दशकमा देशमा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ । हाम्रा तामाङ जातिले पनि विकासको ठूलो फड्को मारिसकेको छ । अरूको भन्दा केही कम देखिन सक्छ, तर देशको हरेक क्षेत्रमा हामी व्याप्त छौँ । आफ्ना अधिकारप्रति सजग छौँ । विश्वास गरौँ, विशेष उपलब्धि प्राप्त हुने नै छ ।